Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguChristo
Ukuba uyayithanda indalo kunye nendawo enoxolo enendawo eninzi, uyakukonwabela ukuhlala kwakho apha. Eli likhaya lelizwe elizinze kumbindi wehlathi kukho amaxhama ahambayo, iintaka ezintyilozayo & neenyosi zibhuza. Ikhaya ngumsebenzi oqhubekayo kwaye uhlala uphuculwa. Umtsalane othobekileyo we-rustic one-knotty pine, indawo yomlilo yamatye, isitayile esidala kunye nekhaphethi efileyo, kodwa icoceke kakhulu kwaye ithambile. Yonwabela ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, ibarbecue, iWi-Fi ebalaseleyo, iTV yescreen esikhulu kunye nokukhethwa kweeDVD.
Eli khaya lasekhaya likhulu kakhulu linesilingi eziphakamileyo, linamagumbi kwaye lihlala licocekile. Imisebenzi kulo mmandla ibandakanya indlela yokungcamla iwayini, ukukhwela ibhayisekile eMt, ukukhwela intaba, ukukhwela inqanawa, i-kayaking, ukukhwela umlambo kunye nokuloba. Umlambo waseMelika yimizuzu eyi-15 kuphela. Zive ukhululekile ukusebenzisa i-2-man kayak kwindawo. Uya kusetyenziselwa ngokupheleleyo umgangatho wokuqala wekhaya kunye nendawo ephezulu. Amagumbi okulala amabini aphezulu kwaye atshixiwe kwaye awahlali mntu.
iisofa eziyi-2, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2
4.77 · Izimvo eziyi-56
Yindawo ezolileyo kakhulu apho uninzi lwabantu bendawo besidla umhlala-phantsi. Kukho ikhefi encinci ekufutshane ebizwa ngokuba yiDine & Dash, ukutya okumnandi kunye neziselo. Umlambo waseMelika okufutshane yindawo entle yokuqubha kunye nokunyuka intaba. Ivenkile yegrosari ekufutshane ziimayile ezisi-7 eColfax.
Umbuki zindwendwe ngu- Christo
Njengomamkeli wakho ndifumaneka nge-imeyile, umbhalo okanye umnxeba yonke imihla ngoko ke nceda ungalibazisi ukufowunela okanye ukuthumela umyalezo kum ngayo nayiphi na imibuzo okanye imiba.